लिलामी बिक्रीमा ओइरिए सेयर, कसरी पेस गर्ने बोलपत्र ?
हकप्रदमा नबिकेको सेयरलाई लिलामीमार्फत बिक्री गर्न यतिबेला आधा दर्जन कम्पनीहरुले सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेका छन्। पुँजी वृद्धिको अन्तिम तयारीमा रहेका कम्पनीले असार मसान्तभित्रै लिलाम बिक्री गरी आगामी वित्तीय विवरणमा उल्लेख्य पुँजी देखाउने तयारी गरेका हुन्। साउन महिनामा बैंकहरुले वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्दछन्।
सेयर लिलामी बिक्रीका लागि बाढी आइरहँदा दोस्रो बजारलाई समेत प्रभाव परेको विश्लेषण हुन थालेको छ। लिलामीको सेयर केही सस्तोमा पाइने भएकाले बजार बढ्न नसकेको केही लगानीकर्ताको गुनासो छ। लगानीकर्ता प्रविणराज खरेल भन्छन् ‘सम्वन्धित कम्पनीको सेयर लिलामीमा आउने भएपछि बजारमा त्यसका क्रेता हुँदैनन् र सेयर होल्डरले पनि भएको बेचेर लिलामीमा सस्तो किनेर जोखिम घटाउन चाहन्छन्, यसले मूल्य झनै घटाउँछ।’
आधा दर्जनभन्दा धेरै कम्पनीले बोलपत्र आह्वान गरिसकेको र अन्य दर्जन कम्पनीको पनि लिलामीमा आउने भएकाले पनि अहिलेको बजारलाई प्रभाव परिरहेको उनले बताए। हालै एनआइसी एसिया बैंक र प्रभु इन्स्योरेन्सले सेयर लिलामी गरी बोलपत्र खोलेका छन्।
सिटिजन्स बैंकः बैंकको असार १५ देखि २१ गतेसम्म लिलामीको सेयर बिक्री खुला हुने भएको छ। संस्थापकतर्फको १ लाख ९९ हजार ३ सय १३ र सर्वसाधारणतर्फको ४ लाख २० हजार ४ सय ९० कित्ता बिक्री गर्न लागिएको प्रवन्धक सानिमा क्यापिटलले जनाएको छ।
इच्छुक आवेदकले सानिमा बैंक नक्सालमा रहेको सानिमा क्यापिटलको नाममा खाता नं ००१०००१०५४४०७ मा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। बिहीबार कारोबार बन्द हुँदा सिटिजन्सको बजार मूल्य प्रतिकित्ता ३८० रुपैयाँ रहेको छ
लक्ष्मी बैंक: बैंकले कुल ३ लाख ९४ हजार ९ सय ३९ कित्ता सेयर लिलामी बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। असार १६ गतेदेखि २३ गतेसम्म इच्छुक लगानीकर्ताले सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्न सक्ने छन्। बिक्री प्रवन्धक लक्ष्मी क्यापिटलको नाममा लक्ष्मी बैंकमा रहेको खाता नं. ००५३४०१०६५८ मा दावी गरेको सेयर वापतको कुल रकम जम्मा गर्न सकिनेछ।
लक्ष्मी क्यापिटल नयाँ बानेश्वरमा सेयर लिलामीको प्रतिफारम १ सय रुपैयाँ तिरेर किन्न पाइन्छ। लामो समयसम्म एभरेष्ट बैंकसँग मर्ज हुने चर्चा चलेको यो बैंकले आफै चुक्ता पुँजी पुर्याउने तयारी गरेको छ। सम्पूर्ण हकप्रद बिक्रीपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३१ करोड नाघ्नेछ। बिहीबार बजार बन्द हुँदा उसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३८४ रुपैयाँ छ।
नेपाल बैंक : नेपाल बैंकको सर्वसाधारणतर्फको १ लाख ८९ हजार ६ सय २९ कित्ता सेयर लिलाम बिक्री हुँदैछ। असार १३ देखि १९ गतेसम्म बोलपत्र पेस गर्न सकिने बिक्री प्रवन्धक सिभिल क्यापिटलले जनाएको छ। सिभिल क्यापिटल मार्केटको नाममा सिभिल बैंक कमलादीको शाखामा खाता नं। ००२१००००४८२०१८ मा रकम बुझाउन सक्नेछन्। बैंकको सेयर मूल्य बिहीबारसम्म बजारमा प्रतिकित्ता ३४२ रुपैयाँ कायम छ।
टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक: बैंकको संस्थापकतर्फको कुल ४ लाख ३८ हजार २ सय र सर्वसाधारणतर्फको २ लाख ६६ हजार ५ सय ३७ कित्ता सेयर लिलामीमा बिक्री खुला हुने भएको छ। असार ७ देखि १५ गतेसम्म इच्छुकले बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्। बिक्री प्रवन्धक एनआइबिएल क्यापिटलको नाममा कुमारी बैंक पुतलिसडकमा रहेको खाता नम्वर ०१२४५२४६१५४२५०१७ मा रकम बुझाउन सक्नेछन्। कम्पनीको मूल्य बिहीबार कारोबार सकिँदा प्रतिकित्ता ४२७ रुपैयाँमा रहेको छ।
गरिमा विकास बैंक : असार १८ गतेदेखि २३ गतेसम्म यो बैंकको सेयर लिलामीमा बोलपत्र पेस गर्न सकिन्छ। बिक्री प्रवन्धक एस क्यापिटलको नाममा एस डेभलपमेन्ट बैंक नारायणचौरमा रहेको खाता नम्वर ००११०४३९०१ सीए ६ मा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन्। २५ गते बोलपत्र खोलिने क्यापिटलले जनाएको छ। बिहीबारसम्म कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २९३ रुपैयाँ रहेको छ।
डिप्रोक्स लघुवित्त: चितवनको नारायणगढमा प्रधान कार्यालय रहेको यस लघुवित्तको असार ४ देखि ११ गतेसम्म बिक्री खुला भएको छ। सर्वसाधारणतर्फको कुल १५ हजार ९ सय ६९ कित्ता सेयर लिलामीमार्फत बिक्री गर्न लागिएको प्रवन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले जनाएको छ।
लगानी गर्न चाहनेले नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङको नाममा नविल बैंकको खाता नम्वर ३५०६०१७५००००६ मा रकम बुझाई सोको भौचरका साथमा आवेदन दिन सक्नेछन्। मंगलबारसम्म कम्पनीको सेयर मूल्य १३०० रुपैयाँ छ।
कसरी पेस गर्ने बोलपत्र ?
कुनै पनि कम्पनीको सेयरलाई बजार मूल्यभन्दा धेरै तिर्नु आफ्नो सम्पत्तिलाई जोखिममा पार्नु हो। हालै लिलामीमा बिक्री भएको एनआइसी एसिया बैंक होस् वा प्रभु इन्स्योरेन्स। बजारमूल्यभन्दा धेरै रकम तिर्ने लगानीकर्ता पनि भेटिए।
प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको एनआइसी एसिया बैंकको सेयरलाई ६ सय १३ रुपैयाँसम्म हालेको पाइयो। त्यस्तै १०२० रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको प्रभु इन्स्योरेन्समा १०६० हाल्ने पनि भेटिए।
विगतमा लिलामी भएका सेयरको संख्या र बजार मूल्यलाई आधार बनाएर आफूले मूल्य तोक्नुपर्दछ। प्रतिकित्ता तोकेको मूल्य र सेयर संख्याको गुणामा आउने रकम बिक्री प्रवन्धकको नामको खातामा सम्वन्धित बैंकमा गई रकम जम्मा गरिदिनुपर्दछ।
जम्मा गरेको रकमको भौचर सुरक्षित राखी बिक्री प्रवन्धककोमा गई प्रतिफारम १ सय रुपैयाँ बुझाएर आवश्यक विवरण भर्नुपर्दछ। भरिएको त्यो फारमको साथमा भौचर राखी खामले सिलवन्दी गरी बुझाउन सकिन्छ। दोस्रो बजारमा किन्दा बुझाउनुपर्ने ब्रोकर कमिसन र डिपी शुल्क जोगिने भएकाले लिलामी सेयरको जोखिम बजारमा किनेभन्दा कम हुन्छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार १०, २०७४ ०१:५८:०६